The Ab Presents Nepal » भित्र दलित बाहिर अर्कै जात भन्दै हिड्नेहरुलाई कार्वाही गर्छु: अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा (दलित आयोग)
भित्र दलित बाहिर अर्कै जात भन्दै हिड्नेहरुलाई कार्वाही गर्छु: अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा (दलित आयोग)
काठमाडौं-: दलित समुदायकै कतिपय मानिसहरु आफु दलित हुँ भन्न हिच्किचाहाट मान्ने गर्दछन् । आफु दलित भएकोमा कसैले हेंला होचो गर्छकी भन्ने मानसिकता बाट सबै भन्दा पहिला आफु मुक्त हुन जरुरी छ ।
दलित आयोगका अध्यक्ष देवराद विश्वकर्मा भन्छन्, गैरदलित समदायसंग मिल्ने थर प्रयोग गरेर मौका परे दलितबाट फाईदा लिने, मौका परे फेरी गैरदलिततिरबाट पनि फाईदा लिने गर्नु भएन । स्पष्ट रुपमा आफु को हुँ भन्ने पहिचान र गर्वकासाथ आत्मासम्मानमा बस्नु पर्यो । उनि भन्छन्, मैले कतिपय ठाउँमा देखेको छु हाम्रा दलित साथीहरु आफ्नो परिचय दिंदा नाम स्पष्ट भन्ने, पछाडीको थर भन्न हिच्किचाउने वा सानो स्वरमा भन्ने गर्दछन् ।
त्यसो गर्नु भएन, म मेरो नाम देवराज भन्दा मेरो थर विश्वकर्मा चर्को स्वर र गर्वका साथ छाति फुलाएर भन्ने गर्दछु । मलाई विश्वकर्मा भएकोमा गर्व छ । जातकै कारण कोही ठुलो कोही सानो हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिन ।
म पनि संस्कृतको विध्यार्थी हुँ, हिन्दु धर्म-ग्रन्थ देखि विभिन्न संस्कृतका पुस्तकहरु अध्यन गरेको छु, पुराण, महाभारत देखि वेदहरु कतैपनि मानिस-मानिसबीच जातका कारण विभेद गरिएको भनि लेखेको छैन । विभेदको मुख्य समस्या हाम्रो समाजमा छ ।
हाम्रो समाजमा राम्रो संस्कार र संस्कृतीको पालना भएको पाईंदैन । मानिसलाई सुयोग्य, ठुलो बनाउने भनेको उसको कर्म, संस्कार र संस्कृतीले हो । उच्च संस्कार र संकृतीको कमिले आज जातिय विभेद र सामाजिक उत्पिडनका समस्याहरु समाजमा ज्युका तिउँ बनेका छन् । हाम्रो समाज शिक्षित त भयो उच्च संस्कारिक भएन ।
हाम्रा पिता पुर्खाका पाला कतिपय अवस्थामा जातिय विभेद थियो होला, तर समाजमा एक खालको आदरता र सम्मान थियो र अहिले पनि छ । मेरो बुवालाई गैरदलित समुदायका कतिपय दिदीबहीनीहरुले दाजु मानेर ढोग भेट गर्ने गरेको देखेको छु ।
के त्यही होईन र उच्च संस्कार भनेको ? एक्काईसौं सताप्दीमा हाम्रो शैक्षिक स्तर बढ्दै गइरहँदा हामी संस्कार र संकृतीविहीन बन्दै गइरहेका छौं । यो राम्रो होईन, म दलित आयोगमा नियुक्ति भएको करिव दुई महिना जति भयो ।
जातिय विभेद कम गर्दै लैजाने हामी सबैको लक्ष हो । अबको ५ वर्ष वा थप अरु ५ वर्ष गरि १० वर्ष भित्रमा यो जातिय विभेदको अन्तय हुनुपर्ने मेरो मान्यता छ । त्यसको लागि दलित तथा गैर दलित समुदाय सबैको सकरात्मक पहल कदम हुनु पर्दछ । हामी सबैले हातेमालो गरेर मात्र यो संभव छ ।
दलितभित्र पनि गैरदलित जातहरुसंग मेलखाने थुप्रै जातहरु भएकोले समाजमा एक खालको भ्रम सिर्जना भएको छ नी भन्ने हाम्रो प्रश्नमा विश्वकर्मा भन्छन्, हो ठिक भन्नु भयो, यसले हाम्रै समुदाय भित्र पनि विवाद नल्याएको होईन, जसलाई हामीले पछिल्लो समय गैरदलित समुदाय वा जातसंग मिल्ने भनेर छुट्टै वर्गीकृत गरेका छौं,
जुन नेपाल सरकारले संविधानमै उल्लेख गरि पारित समेत गरेको कुरा हो । कसैले त्यसरी गैरदलितको जात प्रयोग गरेर दुबैतिर फाईदा नलेवस् वा दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि हामीले अँझै पहल कदम चालिरहेका छौं, यसको विशेष अध्यन अनुसन्धान गरेर व्यवस्थापन पनि गर्छौं, भित्र दलित बाहिर अर्कै जात भन्दै हिड्नेहरुलाई कार्वाही समेत गर्छु ।
दलित आयोगका अध्यक्ष मा. देवराज विश्वकर्मासंग गरिएको कुराकानीका आधारमा!